I-Samsung Galaxy S4 kunye neMovistar, iVodafone, iOrange kunye neYoigo | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy S4: amaxabiso kunye nabaqhubi abaphambili baseSpain
UAlfonso de Frutos | | Iiselfowuni, Samsung
Njengoko usazi kakuhle Ngo-Epreli 27 kulindeleke ukuba i-Samsung Galaxy S4 ithengise imarike yaseSpain. Iya kuba ekugqibeleni Inguqulelo ye-i9505 kunye neprosesa yeQualcomm Snapdragon 600 wee-cores ezine kwi-1.9GHz yamandla ahlala kwilizwe lethu.
Sele siyazi ukuba i-S4 iya kubiza i-euro ezingama-699 simahla. Namhlanje sikuzisa amathuba ahlukeneyo thenga i-Samsung Galaxy S4 kunye nabaqhubi abaphambili baseSpain.
1 I-Samsung Galaxy S4 kunye neMovistar
2 I-Samsung Galaxy S4 kunye neVodafone
3 I-Samsung Galaxy S4 kunye neorenji
4 I-Samsung Galaxy S4 kunye neYoigo
I-Samsung Galaxy S4 kunye neMovistar
Ingxilimbela yezonxibelelwano iyaqhubeka nomgaqo-nkqubo wayo wokwenza abathengi bayo bahlawule iifowuni zabo. Kodwa imeko ye-Galaxy S4 ineentloni. Kwaye ngaba I-Samsung Galaxy S4 iya kubiza i-euro ezingama-26 kunye ne-VAT Ngexesha leenyanga ezingama-24 zokuba sisigxina, nangona ngaphandle kwentlawulo yokuqala.
Ukuba senza ukubala sinokubona ukuba ixabiso lilonke le-l I-Samsung Galaxy S4 ene-Movistar ngama-euro angama-755,04, Yiza, kutshiphu ukuyithenga simahla. Eyona nto intle kukuba abathengi be-Movistar baya kuba nesaphulelo se-euro enye kuwo onke amanqaku angama-500 aqokelelweyo. Kodwa kubonakala ngathi kukukhwabanisa okwenyani kum.
I-Samsung Galaxy S4 kunye neVodafone
inthanethi Ngomnye wabasebenzi abaye bayekisa ukuxhasa iifowuni zabo, nangona benze inkqubo ethi, ixhomekeke kuluhlu olukhethiweyo lwe-smartphone kunye nenqanaba lesivumelwano, ihlawule ixabiso elinye okanye elinye.
Ngapha koko, yonke into inokonakala kobu bomi, ngokwenza ukubala okulula siyakubona oko I-Samsung Galaxy S4 eneVodafone iya kubiza i-euro ezingama-20 ngenyanga. Ewe kunjalo, kuxhomekeke kwinqanaba, ixabiso elothusayo liyenyuka.
Nge Umgangatho wesiseko kunye neSiseko 2, intlawulo yokuqala yesixhobo i-249 yokuphatheka okanye yokuhlaziya, i-euro ezingama-279 zokufuduka kunye nama-299 kubhaliso olutsha. Ukuba siphinda-phinda ii-euro ezingama-20 ngenyanga ngeenyanga ezingama-24 zesisigxina, sidibanisa intlawulo yokuqala kwaye songeza i-VAT, ifowuni iyadubula, ngokulula idlula i-euro ezingama-800.
Kwimeko Umgangatho wesiseko 3 intlawulo yokuqala incitshisiwe ngandlela thile: i-199 yokuphatheka kunye nokuhlaziywa, i-229 kwimeko yokufuduka kunye ne-249 euro ukuba ubhalisa ngokutsha. Kwaye ayikokudubula iirokethi. Ewe, ukuthatha amaxabiso aphezulu, kusetyenziswa ubuncinci be-euro ezingama-35 ngenyanga kunye neVAT, izinto ziyaphucuka noko.
Ngale ndlela kunye Ixabiso elibomvu Ukuthwala kunye nokuhlaziya kwehla kuye kwi-99 euros, ngelixa ukufuduka kufikelela kwi-129 euro kwaye ubhaliso olutsha yi-149 euro. Kwindaba ye Ixabiso elibomvu le-2 Ukuthwala kunye nokuhlaziywa kuhlala kwi-euro, ukufuduka kwi-euro ezingama-79 kunye nokubhaliswa okutsha kwi-99 euro.
Abo bachitha inkoliso yabo banethamsanqa kuba ukuba uqesha iRed 3 rate ngokwenza ukuhambisa okanye ukuvuselela baya kufumana i-Samsung Galaxy S4 kwii-euro ezingama-0 Njengentlawulo yokuqala, ngelixa ukufuduka kunyuka ukuya kwi-29 ye-euro kunye nokuphakama okutsha ukuya kuma-euro angama-49.
Ewe, ekuphela kwendlela yokungakhohliswa konke konke kukuqesha ubuncinci be-euro ezingama-35, kwaye ukuba ungomnye wabo basebenzisa imiyalezo yemiyalezo kwangoko kuneefowuni, ekuhambeni kwexesha akukho nto iya kuhlawula.
I-Samsung Galaxy S4 kunye neorenji
I-Orenji kuphela komsebenzisi igcina igranti yesiphelo. Kwaye i-Samsung Galaxy S4 ayizukukhetha. Nangona ikwabonelela ngenkqubo yokuhlawula izavenge. Siza kuqala ngezibonelelo.
I-Samsung Galaxy S4 inentlawulo Umnenga 22 okanye iDolphin 20 ibiza i-499 euro. Ukuba sikhetha iBallena 32 okanye iDolphin 30 amaxabiso ehla aya kwi-349 euros, ngelixa iBallena 42 okanye iDolphin 40 i-Galaxy S4 ihlala kwi-289 euros. Okokugqibela, ukuba siqesha iBallena 55 okanye iDelfín 60, ixabiso lincitshisiwe laya kwi-169 euro.
Kwimeko yokufuna ukuhlawula i-smartphone ngezavenge, sinokuyenza nge IDelfín 35 okanye iDelfín 12 yokuhamba ngentlawulo yokuqala yee-euro ezingama-59 kunye neentlawulo ezingama-24 ze-euro ezingama-25 ngenyanga. Ama-euro angama-659 ewonke. Ubuncinci asiqhathwa ngokupheleleyo ngumqhubi waseFrance.
I-Samsung Galaxy S4 kunye neYoigo
Okokugqibela sinoYoigo. Umqhubi uqalile umgaqo-nkqubo wezezimali osekwe kwinqanaba lokungena. Ukuba senza ukuphatheka ngenqanaba le-2, ifowuni ishiywe ukuhlawula i-0 evenkileni kunye ne-25 euro ngenyanga kunye nenqanaba. Ukuba sikhetha i-Megaplana 20, i Intlawulo yenyanga ye-Samsung Galaxy S4 Iyancitshiswa yaya kwi-euro ezingama-20 ngelixa i-Infinite 30 kunye ne-39 yehla yaya kwi-15 ye-euro. Onke amaxabiso aneVAT sele ebandakanyiwe.
Isiphelo sicacile: olona khetho lulungileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, Yoigo. Ukuba uchitha imali encinci uhlala kwi-euro ezingama-600, kwaye uhlawula kancinci kancinci. Ukuba ubiza into, nge MegaPlana 20 ifowuni iya kubiza i-euro ezingama-480. Ukuba ungomnye wabo bathetha naphantsi kwamanzi, i-S4 ikushiya ngezavenge i-euro ezingama-360.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S4 iza kufika nge-27 ka-Epreli
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S4: amaxabiso kunye nabaqhubi abaphambili baseSpain
eMexico nge-telcel ikhululekile * kwisicwangciso (sinyanzelwe ukuya kwiinyanga ezingama-24) ze-1,000 pesos ngenyanga UKWEBULA KWENYANISO !!
Ngaba kusekho abantu abakhetha i-S4 ene-Nexus 4 kwii-349 Euro? Andiqondi, ngokwenene.
Uhlelo lokusebenza lweNqaku eliMangalisayo, i-Galaxy Note 8 amanqaku asetyenziswayo ayafumaneka ukukhuphela
Izaziso kwisikrini sakho sokukhiya ngeSaziso seWidget yeSaziso